Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Chivabvu 13, 2021
Kuwedzerwa kwenguva yekuramba vari pabasa kwemukuru wevatongi vematare edzimhosva, VaLuke Malaba, kwakaitwa nemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, nemusi weChipiri, kosimudza mutauro mukuru munyika.
America inoti haina chinangwa chekuchinja hurumende yemuZimbabwe asi kuti inongoda kuti Zimbabwe itevedzere hutongi hwejekerere pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu munyika.
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vanokumikidza dhamu reMuchekeranwa, iro riri pamuganhu weMashonaland East neManicaland, pamwe nekuparura chirongwa chenharaunda chekuchengeta hove pasi pehomwe yePresidential Community Fisheries Scheme.
Vagari vekuMasvingo voshora zvikuru danho rekanzuru yavo rekuitira musangano wayo muguta reBulawayo vanhu vachigara mumahotera anodhura panguva iyo kanzuru iri kutadza kuitira vagary mabasa akakosha muhupenyu hwavo.
Sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti rinotambira nemufaro mukurun danho rehurumende rekurambidza kupinda munyika kwechibage nezvimwe zvinogadzirwa kubva muchibage zvinobva kunze kwenyika.
Muchirongwa cheWomen’s RoundTable na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi pamwe nezvinhu zvinotyora kodzero dzavo.